UpSnap: Intengiso efikelelekayo yeselfowuni, yaseKhaya, kunye nokuJoliswa kweJografi | Martech Zone
I-UpSnap: Intengiso efikelelekayo yeFowuni, yeNgingqi, kunye nokuJoliswa kweJografi
NgoMvulo, Agasti 3, 2015 NgoMvulo, Oktobha 12, 2015 Douglas Karr
I-UpSnap ibonelela ngomnatha wentengiso yeselfowuni onikezela ngaphezulu kwesigidi esinye senyanga ngenyanga. Kwaye ngokubambisana kwabo nezinye zezona ndawo zinkulu, bayakwazi ukubonisa iintengiso kuthungelwano lomntu wesithathu kwinqanaba elingaphezulu kwe-100 yezigidigidi zenyanga. I-UpSnap ikwenza ukuba ujolise kubathengi abakufutshane neshishini lakho. Nje ukuba iphulo lakho liqhubeke, i-UpSnap iya kubonisa intengiso yakho yeselula kubathengi abakwi-radius yeemayile ezintlanu. Ukujolisa kuyanda ngaphandle ngokusekwe kubukho bezithuthi kunye nerediyasi oyifunayo.
I-UpSnap ibonelela ngayo yonke into ukusuka kuyilo lwentengiso ukuya kwingxelo:
Emva kokubhalisa, fumana umnxeba ovela kwi-UpSnap Mobile Expert ukugqibezela iinkcukacha zomkhankaso wakho wentengiso yeselfowuni.
I-UpSnap iya kuyila kunye nekhowudi iphepha lokufika kunye nesibhengezo sentengiso kwishishini lakho. Konke okufuneka ukwenze kukuphonononga kwaye uvume ubugcisa.
Intengiso yakho iya kuboniswa ukuya kuthi ga kumaxesha angama-20,000 ngenyanga kumakhulu eziza eziphezulu kunye nee -apps ze- $ 100 / mo kuphela.
Qala ukufumana iifowuni, kutyelelo lwevenkile kunye nokunye. Kwaye, unokujonga ukusebenza kwephulo lakho ngenyanga kubahlalutyi ingxelo.
I-UpSnap ibonelela ngentengiso eguqukayo esebenza ngokusekwe kwindawo, umshicileli, usetyenziso lweselfowuni, kunye neprofayili yabathengi.
I-SNAPalytics ibonelela ngedatha enkulu kubahlalutyi nakubona bathengisi bancinci. Qonda indlela yokuziphatha komsebenzisi kwaye uzibandakanye nomlinganiso wexesha lokwenyani lokujolisa kubathengi kwindawo apho bakulungeleyo ukuzibandakanya.
tags: Ukujoliswa kwendawointengiso yendawoIndawo yentengiso esekwe kwindawoinethiwekhi yentengiso yeselfowuniiintengiso zeselfowuniiintengiso zendawo ezihambayoUkujolisa kwiselfowuniphezulu
Uyenza njani iKhalenda yokuThengisa ngezeNtlalo
Ukungabikho kwempendulo yeNtlalontle kulimaza ishishini lakho
Oktobha 11, 2016 ngo-12: 19 PM
Inkampani yethu ityala imali kwiphakheji yovavanyo kunye ne-Upsnap. Gqibezela inkcitho yemali kunye nexesha. Akukho ngxelo, akukho zikhokelo, akukho ngxelo.
Musa ukuchitha ixesha lakho.